Soo dejisan Linkedin 4.0.89 – Vessoft
Qeybta: Shabakada bulshada
Bogga rasmiga ah: Linkedin
LinkedIn – software ah si aad u raadiso shaqo aad u bixisay in shabakada caanka ah bulshada oo isku xidhaya ka badan hal milyan oo dheeraad ah shirkadaha ganacsiga iyo ganacsatada. LinkedIn kuu ogolaanaya in aad geliyaan aad resume gaar ah search dheeraad ah oo wax ku ool ah ee shaqada ee rukummada kala duwan ee dunida. software waxaa ku jira liiska shirkado badan iyo wakiillo ay u dhexgalaan kala duwan in u saamaxaaya user ah in ay go’aan aan fiicnayn oo ka mid ah xirfad iyo jagooyinka. LinkedIn taageertaa muuqaalada caadiga ah shabakad bulsho iyo bandhigayaa news kala duwan ee suuqa shaqada la xidhiidha danaha user ah. Sidoo kale LinkedIn u saamaxaaya in ay daawadaan siminaaro kala duwan ama GOORMUU iyo si aad u eegto articles ku saabsan tabo cusub oo xiiso leh sano ee la soo dhaafay.
Search ee shaqada iyo isgaarsiinta shaqeeyayaasha
Review of shirkado badan iyo madaxda kala duwan ee dunida
Bannaanbaxa xogta gaarka ah iyo waayo-aragnimo shaqo
View of wararka xiiso leh oo ku saabsan suuqa shaqada
Soo dejisan Linkedin
Faallo ku saabsan Linkedin
Linkedin Xirfadaha la xiriira
Instagram – softiweer sii jooga mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee lagu booqdo adduunka. Codsiga waxaa ku jira saamayn badan oo garaafyo iyo miirayaal shaashad wax ku ool ah oo leh sawirro.
Facebook – adeegsiga shabakadaha bulshada ee ugu caansan. Barnaamijku wuxuu awood u siinayaa inuu arko oo abuuro waxyaabo kala duwan oo ka jira shabakadda bulshada.
Facebook Lite – nooc fudud oo ka mid ah macaamiisha shabakadda bulshada caan ka ah oo adeegsada nidaamka ugu hooseeya isla markaana si habsami leh uga shaqeeya shabakadaha leh xiriir daciif ah.
Google+ – waa softiweer ay kuwada xiriiraan kuna maareeyaan shabakada bulshada ee shirkada caanka ah. Softiweerku wuxuu mideeyaa dhammaan adeegyada Google oo waad ku hirgelin kartaa isku-xirnaantooda koontada isticmaale.
The shabakad bulsho caan ah oo u ogolaanaya inay la xiriiraan adduunka oo dhan oo ay taageertaa kulan gaar ah in dhiiri isbarteen ee dadka isticmaala.
Khadka dhulka hoostiisa ee Amazon – waa dukaan app caan ah oo taageera waxyaabo badan oo kaladuwan iyo suurtagalnimada in la soo dejiyo codsiyada la bixiyo inta lagu jiro waqti xaddidan.
Maareeyaha Soo dejinta – maamulaha wax soo dejinta shaqeynaya oo leh biraawsarka ku dhex jira. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay howsha in la joojiyo oo dib loo bilaabo soo dejinta feyl.